Paxful Isikhwama Semali Se-Bitcoin
Thola isikhwama sakho semali se-bitcoin esimahhala nesivikelekile
Indlela elula nephephile yokuthenga, ukuthengisa, ukuthumela nokulondoloza i-Bitcoin yakho.
siyindlela ephephile nelula yokunakekela imali yakho. Bhalisa namuhla futhi uzotholele ngokwakho ukuthi kungani izigidi zabantu zisithemba.
Thola isikhwama sakho semali se-bitcoin samahhala
Isikhwama semali se-Bitcoin ongasethemba
Abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-3 basebenzise isikhwama semali se-Paxful ukuze bathumele futhi bamukele ngaphezu kuka-40,000 BTC. Okokuvikeleka okusezingeni eliphezulu kuyenza ibe yisikhwama semali esithenjwa kakhulu emhlabeni — ngeke kudingeke ukhethe phakathi kokuphepha nokuba lula kwayo.
Isikhwama semali se-Paxful sisebenza kahle, siphephile futhi kulula ukusisebenzisa kuwo wonke amadivayisi akho. Unganakekela kalula izimali zakho futhi ufake imali ngokuqondile ngemakethe yethu ye-peer-to-peer, futhi uthumele noma wamukele i-Bitcoin, ngokuchofoza nje kambalwa.
0% Akukho zindleko zokusebenza ezithathwayo
6,000,000 Amakhasimende ajabule
+2,000,000 Izikhwama zemali
Awukaqiniseki namanje? Siyaqonda. Nazi ezinye zezizathu ezenza kufaneleke ukuba uthole Isikhwama Semali Se-Paxful.
E-Paxful, sibheka ukuphepha kwemali yakho njengento ebaluleke kakhulu. Ukuqinisekisa kwethu okuqinile kanye nezimfuneko zephasiwedi ziqinisekisa ukuthi nguwe wedwa kuphela okwazi ukufinyelela imali yakho.
Jabulela inkululeko yokuthenga nokuthengisa i-Bitcoin yakho ngezindlela ezingaphezu kwezingu-300. Imakethe yethu ye-peer-to-peer ikuxhumanisa ngokuphephile ngasese nabantu abangokoqobo abafana nawe.
Finyelela imali yakho ngokuphephile noma kuphi, noma nini. Ngenxa yamandla e-cloud, ngeke ulahlekelwe yimali yakho ngisho noma ungalahlekelwa yidivayisi yakho.
Abasebenzisi bethu bayasithanda!
Bona lokho abantu abakushoyo ngathi.
Njengoba kuboniwe ku...
Zitholele isikhwama sakho semali samahhala se-Paxful manje!
Thengiselana ngokushesha, futhi uthenge i-Bitcoin ngokushelelayo namuhla!
Bhalisela isikhwama sakho semali samahhala